Obani Ngempela Ababukeli Bakho Obhekiswe Kubo? | Martech Zone
NgoLwesibili, ngoJuni 14, i-2011 NgoLwesithathu, Okthoba 16, 2013 Douglas Karr
Okunye ukungaqondi okuyisisekelo ngemidiya eku-inthanethi ukukhomba ukuthi obani izithameli zakho. Baningi kakhulu abantu abagxila ekutheni amathemba abo akhona noma cha. Kuleli sonto, sisebenze nenkampani eyodwa ebikhala ngokuthi amathuba akhe we-C-level awekho ku-inthanethi.
Ngeke ngiphikisane nokuthi lokho kuyiqiniso noma cha. Kepha imidiya eku-inthanethi yakhiwe ngabantu abaningi abehlukene abangathonya amathemba ezingeni le-C futhi bamthole phambi kwabo. Imicimbi yomphakathi inikeza amathuba. Ukuxhumana ngamasayithi afana ne-LinkedIn kukusondeza. Okuthunyelwe ngebhulogi, ukukhuluma ngomphakathi nabalandeli bakusiza ukuthi uqhubeke uzungeze lokho okulindelwe futhi wenze inkampani yakho ibonakale.
Isibonelo, uma inkampani yakho ifuna abatshalizimali bokuqalisa nosomabhizinisi, amafemu ezobuchwepheshe obuphezulu, abameli be-IP nabasunguli bokuqalisa, kanye nama-accountants wokuqalisa bangabantu abakhulu abangaphambi kwabo. Banobudlelwano futhi banikela ngesihlungi nokuvikela kulawo mathemba. Babeke umxhwele futhi uzongena phambi komuntu odinga ukwenza kanjalo.
Njengoba usebenza isu lakho lezenhlalo, ungafakwa ocingweni lokuthi zingobani lezi zivakashi noma ukuthi zivelaphi, gxila ekutheni lezo zivakashi zikhuluma ngawe futhi zikuletha ethembeni! Ubudlelwano nalabo bagqugquzeli nabahlunga yinto ebaluleke kakhulu okufanele ungayinaki.